अ’धिकांश मानिसहरमा अहिले प’त्थरीको समस्या देखिने गरेको छ । प’त्थरीको समस्या देखिनुको मुख्य कारक खा’नपीन नै हो । खानपीनमा विशेष ध्यान नदिँदा धेरैलाई मि’र्गौलामा प’त्थरीको समस्याले सताउने गर्छ । मृ’गौलामा प’त्थरी भइसकेको छ अथवा हुने जो´खिम छ भने प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ । पानी प्रशस्त पिउने गर्नाले प´त्थरी बन्ने खनिज पदार्थ पिसावमार्फत बाहिर जान्छ । गहतलाई कुलथी पनि भनिन्छ । गहत खानाले प’त्थरी फाल्छ भन्ने कुरा अधिकांश नेपालीलाई थाहा भएको कुरा हो । ग’हतको सेवनले कि’ड्नी स्टोन फाल्दछ । प’त्थरीको उपचार गर्दा हमेसा कडा औ’षधि प्रयोग गरेको पाइन्छ । घ’रेलु औषधिमा गह’त पनि एक हो । प’थरीको उपचार गहतले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे जानकारी पाउनु आवश्यक छ । ग’हतमा भिटामिन ए पाइने भएकाले पत्थरी बन्नबाट रोक्ने काम यसले गर्दछ । हाम्रो विचार सस्तो सुलभ आफ्नै घरमा भएको औषधि नदिएर हामीले महंगो औषधि सेवन गराउदछौं ।
यस्तो छ गहतको दाल खाने तरिका: १। गहतको दाल २५० ग्राम ल्याउनुहोस् । राती ३ लिटर जति पानीमा भिजाएर राख्नुहोस् र बिहानै हल्का आगोमा ४ घण्टा पकाउनुहोस् र शु´द्ध घिउले झान्नु होस् त्यसमा कालो मरिच, सिधेनुन, जीरा, हलेदो हाल्नुहोस् १० एमएम सम्मको प´त्थरी झार्दछ । प’त्थरी हुदा के खाने के नखाने: १. प’त्थरी हुँदा गहत, खरबुजो, मूला,अमला, मूंङको दाल, चौलाई भाजी खाने । दैनिक ७,८ गीलास पानी दैनिक पिउनु पर्दछ । पत्थरीमा के नखाने: १.मासको दाल, मेवा, चक्लेट, माछा, मासु, चिया, भेण्टा, टमाटर आदि खानुहुदैन ।
सा’वधान ! चि’या पिएप’छि यी ३ ची’ज न’खानुहोस् ! हरे’क दिनको सु’रुवात हामी मध्ये धेरैको चि’याबाट हुन्छ । बिना चीया बिहान र बेलुका कल्पना पनि गर्न स’क्दैनौ । एकपटक चियाको बानी लागेमा त्यसको लत लागिरहन्छ र समय समयमा खोजिरहन्छ । कामकाजी मानिसहरु आफ्नो कामको थकान मेटाउनलाई पनि चिया पिउने गर्छन् । चिया पिउनाले हाम्रो शरीरलाई पनि धेरै लाभ मिल्छ । चियामा हुने एं’न्टीअक्सिडेन्टले केही प्र´कोपबाट रक्षा गर्छ । यसको साथै चियामा अन्य पनि धेरै त्यस्ता तत्व हुन्छन जसले शरीरलाई ला’भ पुर्याउछ ।
मानिसहरुले चियासँग बिस्कुट वा नमकिन पनि खान मन पराउछन्, तर कहिलेकाहीँ यस्ता चीजले हाम्रो शरीरमा हा’नी पुर्याउन सक्छन् । आज हामी यस्तो चीजको बारेमा जानकारी दिन चाहान्छौ, जुन कुरा चियासँग सेवन गर्नुहुँदैन । यदि सेवन गरेमा गम्भीर बिरा’मी हुनपनि सकिन्छ । तातो चिया पिउने बि´त्तिकै पानी पिउन हुँदैन, त्यस समयमा पानी पिउँदा घा’तक सिद्ध हुनसक्छ । चिया पिउने बित्तिकै तुरुन्त पानी पिउनाले हाम्रो नाकबाट रगत आउन सक्छ । मानिसहरुलाई मुला सेवन गर्दा अनुहार र कपाल सफा हुने सम्भावना हुन्छ भन्दै अक्सर खाने गर्छन् । तर चिया पिएपछि कहिल्यै मुलाको सेवन गर्नु हुँदैन । यदि चिया पिएपछि बेसार भएको दुध पिएमा जन्डिस रो’ग लाग्न सक्छ । यसकारण चिया पिएपछि बेसार हा’लेको दुध पिउनबाट बच्नु पर्छ ।
१. कहिल्यै नचपाउनुहोस् सुन्नुभएकै होला- ‘तुलसीको पात कहिल्यै पनि चपाउनुहुँदैन, पाप लाग्छ ।’ अब धार्मिक पक्षबाट हेर्ने हो भने, तुलसीलाई विष्णु भगवानको स्वरूप मानिन्छ र यसको पातलाई दाँतले चपाउनु विष्णु भगवानको अप´मान गरेको हुन्छ । वैज्ञानिक पक्षबाट हेर्ने हो भने, तुलसीको पातमा एक प्रकारको रसायन हुन्छ जसले हाम्रो दाँ’तमा भएको क्याल्सियमलाई सोस्ने काम गर्छ । त्यसैले यसलाई चपाउनु एकदमै हा’नीका’रक मानिन्छ । त्यसैले तुलसीको पात खा´नुपरेमा नचपाई पानीसँग निल्नु सबैभन्दा लाभदायी मानिन्छ र पाप पनि लाग्दैन ।
मुलाको पात मुलाको पातले भोक लगाउने र आ’न्द्राको कार्यलाई सुचारु गराउँछ । मुलाको पातको जुस बनाई फिल्टर गरी खाँदा उत्तम हुन्छ । मेवाको पात एक चम्चा महलाई एक चिया चम्चा मेवाको पातको पेस्टमा मिसाएर खानुहोस् । यसको सेवन ज’न्डिसका लागि निकै प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । उखुको रस उखुमा भएको तत्वहरुले जन्डिसका रोगीले खाएको खानेकुरा वा जुस पचाउन सहयोग गर्नुका साथै कले’जोलाई उचित रुपमा काम गर्न सहयोग पुर्याई बि’रामीलाई जन्डि’सबाट मुक्त हुन सहयोग पुयाउछ । तुलसी पत्ता १० देखि १५ ओटा तुलसीका पात लिनुहोस् र यसको लेप बनाउनुहोस् । यसमा यसमा आधा गिलास ताजा जुस मिसाउनुहोस् । दुई देखि तीन साताभित्रै जन्डि’सबाट मुक्त हुन सकिन्छ । जौ एक मुठी जौलाई तीन लिटर पानीमा मिसाएर सानो आगोमा लामो समयसम्म तताउनुहोस् । यसरी धेरैबेरसम्म तताएको पानीलाई बारम्बार पिउनुहोस । उमालेको जौ पानी ज’न्डिस उ’पचार’का लागि सही तरिका सक्छ